Kooxda al-Shabaab ayaa sheegtey inay dhiseen xarumo lagu daaweynayo COVID-19 – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kooxda al-Shabaab ayaa sheegtey inay dhiseen xarumo lagu daaweynayo COVID-19
Kooxda al-Shabaab ayaa sheegtey inay dhiseen xarumo lagu daaweynayo COVID-19
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay Jimcihii in ay xarun caafimaad ka sameeyeen COVID-19 oo ku yaal dalka, waxayna sheegeen in cudurka uu halis weyn ku jiro, iyaga oo tixraacaya mas’uuliyiinta caafimaadka ee caalamiga ah.
Kooxda ka hortagga iyo daweynta cudurka loo yaqaan corona (virus’) waxay u furtay xarun COVID-19 lagu daweeyo, “kooxdu waxay ku sheegtay idaacad ay ku leedahay Andalus, iyagoo intaas ku daray in xarunta laga sameeyay Jilib, qiyaastii 380 kiiloomitir (236 mayl) koonfurta caasimada Muqdisho.
“Hay’adaha caafimaadka ee caalamiga ah waxay sheegeen in COVID-19 uu si xun ugu faafayo waddamada Afrika.”
In ka badan toban sano kooxda ayaa ku dagaallamayay in ay xukunka ka tuurto dowladda dhexe ee Galbeedka Afrika ayna dhisto dowlad iyada u gaar ah oo ku saleysan fasiraadeeda adag ee shareecada Islaamka.
Waxay si joogto ah u fulisaa qaraxyo iyo weerarada qoryaha ee ka dhanka ah militariga iyo bartilmaameedka rayidka oo ay ku jiraan hoteellada, isgoysyada iyo isbaarooyinka.
Idaacadda ayaa nin sheegta inuu yahay Sheekh Maxamed Bali wuxuu Al-Shabaab uga mahadceliyay sameynta xarunta wuxuuna weydiiyay kuwa qaba calaamadaha inay xarunta soo xaadiraan.
“Waxaan u mahadcelineynaa maamulka dhistay xarunta, waxaan dadka ka codsaneynaa inaysan qarin (cudurka) si looga fogaado in fayraska la faafiyo, dadku waa inay soo xaadiraan xarunta,” ayuu yidhi.
Qof kale oo ka mid ah idaacadda oo aan la aqoonsan ayaa sheegay in xaruntu ay diyaar u tahay gaadiid ay ku qaado bukaannada looga shakisan yahay cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ ee bukaannada ugu yeera daryeelka caafimaadka.
Previous articleLooma baahna inay somaliland dhabar jabiso mucaaradka somaliya
Next articleAbiy Ahmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo saaka gaadhey jibuuti
Golaha Deegaanka Degmada Gaalkacyo ee Puntland oo la magacaabay maanta.
Milatariga iyo kooxaha rayidka ee dalka Suudaan oo “heshiiyay”